fanontaniana "Embraer EMB-120 Mega Pack FSX & P3D"
1 taona 7 volana lasa izay - 1 taona 7 volana lasa izay #891 by bobrad79
Hi ... nametraka io tahiry io aho P3Dv4 fa ny fitaovana tsy miasa,
Nanamboatra fiara aho ary nanandrana nanamboatra fitaovana.
Manantena aho fa ny vatana dia afaka manampy
MAHAFINARITRA NY OLOMBELONA AO AMIN'NY FITIAVANA Ny olana voafatotra THANKS
Last edit: 1 taona 7 volana lasa izay bobrad79.
1 taona 3 volana lasa izay #1065 by davgál1
Te-hanontany momba ny fiantombohan'ny motera amin'ity fiaramanidina ity aho, satria isaky ny manomboka izany aho, dia mamokatra herinaratra mandritra ny minitra 10 ireo fitaovam-pitaterana, na dia eo aza ny Power Levers dia ao amin'ny toerana tsy misy ilana azy, ary koa ny fehezin'ny fehezan-dalàna (feather).
Izaho (mazava ho azy) tsy manao ny tena dingana fanombohana, fa ny fepetra avy amin'ny PDF amin'ny addon.
1 taona 3 volana lasa izay #1066 by DRCW
Voalohany dia esory ny programan'ny fiarovana an-tserasera, ary avereno indray ny programa. Ampahafantaro ahy raha izany no izy
1 taona 3 volana lasa izay #1084 by davgál1
Misaotra anao noho ny valinteninao.
Vita, saingy tsy miasa ...
1 taona 3 volana lasa izay - 1 taona 3 volana lasa izay #1085 by DRCW
Eny, alefako ity poketra mega ity P3D V4 ary jereo ny zava-misy sy ny fomba hamahana azy. Hiverina aminao aho
Last edit: 1 taona 3 volana lasa izay DRCW. Antony: miova FSX ny P3D V4
1 taona 3 volana lasa izay #1086 by DRCW
Raha mamaky ity rindrambaiko ity aho, dia nanamarika tao amin'ny famakiam-boky, fa misy governora mavo iray voatonona eo amin'ny tontonana, izay tsy hamela anao hivoatra ambony 10% amin'ny N1. Ity governora ity dia tokony ho mavitrika mandritra ny fanombohana ary tsy hivoaka amin'ny fiakarana. Raha mihevitra ianao fa mahafantatra an'izany, ary manaraka ny dingana, dia mety hisy izany hoe misy hadisoana ao amin'ny coding. Tohizo ny hafatrao
1 taona 3 volana lasa izay #1087 by DRCW
Okay, efa nijery ny fiaramanidina aho, ary ny olana dia ny famaha olana eo amin'ny tontonana 2D sy ny governora. Hamarino fa ny governora dia eo amin'ny sehatra XnumX D pop up, fa tsy ao anaty fiaramanidina virtoaly. Mandritra ny fiantombohany dia toa mandondona ihany koa ny fanaraha-maso solika. Misy fifandirana eo amin'ny sehatra virtuelle sy 2D. Tsy milalao tsara izy ireo. Ny tontonana virtuel dia mifandray amin'ny rivotra king default amin'ny P3D. Hanao ny sasany hilalao aho ary hijery izay azoko atao
1 taona 3 volana lasa izay #1088 by daveh
Hi, vao avy nandefa ity fonosana ity aho FSX. Eo am-pahatsiarovantena aho fa ity no iray amin'ireo finday faran'izay tsara indrindra nalefako! Ny tahan'ny rafitra dia tsy misy fiantraikany, ary ny antsipirian'ny cockpit (panel 2D, guages ​​etc) dia mahatalanjona. Tsara loatra Rikooo!